Sogang University - -Amụ ná Mba Ọzọ na South Korea. Student magazine
Sogang University Nkọwa
tọrọ ntọala : 1960
Echefukwala atụle Sogang University
Idebanye aha na Sogang University
Sogang University e guzobere site Society of Jesus na-enye ihe ha mụtara na Catholic nkwenkwe na mmụọ nsọ site Jesuit nkà ihe ọmụma nke agụmakwụkwọ, ime na Korean ọdịnala mmụta.
Sogang University Aims na-akụziri nke onye ahụ dum na ịhụnanya na okwukwe, -akwanyere ụkpụrụ na echiche nke mmadụ ùgwù na-agba ume ka achụ na-achọ amụta na ezi obi na-achọ eziokwu. Site na nke a agụmakwụkwọ, ịkụziri talent onye ga-etinye ndụ ha mmepe nke a ụmụ mmadụ bụ omenala na obodo.
Sogang University, dị ka agụmakwụkwọ alụmdi n'okpuru nduzi nke Society of Jesus, -eso ya na omenala na guzobere Jesuit mahadum n'ụwa nile karịrị ikpeazụ 460 afọ, Aims iji nye ọzụzụ na-akụzi na ife Chineke ma na-aghọta ezi pụtara ndụ.
The agụmakwụkwọ awa na Sogang University Aims na-etolite ụbụrụ na-aghọ na agụmakwụkwọ kacha mma na creativity, -eso Jesuit omenala nke e achụ qualitative mma nke muta.
Sogang University Aims ịkụziri ụmụ amaala pụtara ìhè-edu ndú ikike, ndị nwere ike inye aka mee ka ọha mmadụ na mba ya na mmụọ nke nraranye, uche ọrụ, tozuru okè na integrated odide. Ọzọkwa ịkụziri ezi cosmopolitans ndị nwere ike inye aka mee ka mba ọganihu na udo n'ụwa site na nghota nke ugbu a mgbanwe nke ụwa mgbe nile,, ma nabata ya mgbanwe na oké egwu ikpe.
School of Humanities na International n'Obodo
Korean Language na Literature
European asụsụ na omenala
Sogang mmalite Academy
Pep (Political Science, Economics na Philosophy)
Development of Korea na International Cooperation Development
The okobot Fathers aha ya bụ na mahadum “Sogang” (ndị West of Han River). The gaa Sogang College e nyere site Ministry of Education. na February 1960 fr. Kenneth E. Killoren, S.J. e arụnyere ka onyeisi oche mbụ. Sogang College meghere ibo ụzọ ya na isii ngalaba: Economics, English Language na Literature, History, Mgbakọ na mwepụ, Philosophy na Physics. nke 600 ịbata 166 gekwe dị ka ndị mbụ na klas. Klas malitere na 18 April 1960, dị nnọọ otu ụbọchị tupu April mgbanwe.
na December 1969 a mahadum irenti e nyere site Ministry of Education na Sogang College ghọrọ Sogang University. The University ẹkewetde nke a College of Arts na Science na isii ngalaba, College of Science and Engineering na ise ngalaba na a College of Commerce na atọ ngalaba .
on March 2, 1970, nraranye na president nke echichi e ẹkenịmde na Mary Hall. fr. John P. Daly, S.J., were ụlọ ọrụ dị ka onyeisi oche mbụ. O kwuru okwu “Education Dabere na Ikwere na Reason”. on April 7, 1970, South Korean President Park Chung-ne nyere bọs abụọ aka iga ngalaba na mkpara, ma ha mechara nwere na-ere n'ihi management isi ike. Life dị ka a zuru mahadum pụtara ọzọ ụmụ akwụkwọ na ọbá akwụkwọ, nke kpaliri Ricci Hall, mkpa ya ụlọ. Construction nke Loyola Library n'ebe ugwu nke egwuregwu ubi were niile 1973. Ọ bụ South Korea mbụ n'ụzọ zuru ezu na-emeghe-akụ n'ọbá akwụkwọ.
The campus ememme bụ kwa afọ omume na kwụsịrị kwalitere amụrụ ịdị n'otu. ebe ọ bụ na 1969 ọ gụnyere a usoro nke agụmakwụkwọ symposiums.
The akwa mgbe nke 30th ncheta ncheta bụ unveiling nke a akpụrụ akpụ na-anọchi ndị Albatross arị elu na ya oké ọcha nku. The Alumni Association ọkọnọ oyiyi na ihe April 17 unveiling ememe. Sogang eketie kọwakwuru mma n'oge 1990s na a marble n'ihu ọnụ ụzọ ámá, site Albatross oyiyi. The obere ama egwuregwu e renamed Cheongnyeon Gwanjang (Youth Square) ma nye a neater anya. Dị ka ụlọ ọhụrụ e wuru enwere a ụkọ na-adọba ụgbọala ohere, otú a ọtụtụ, e wuru n'okpuru Albatross Square na November 1997 ogbo ụlọ ọrụ maka omenala ihe e wuru n'elu ọtụtụ.
Ị chọrọ atụle Sogang University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Sogang University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Sogang University.